Toeram-pisakafoanana an-tserasera norveziana - Kaody Bonus Bonus amin'ny Internet
(543 vato, average: 5.00 avy tany 5)
Loading ...Ny filokana dia tsy dia malaza matetika any Norvezy. Tamin'ny taona 40 sy 50 ', na lalao kilalao tsotra aza tsy neken'ny fiarahamonina. Ankehitriny dia manana orinasam-panjakana roa i Norvezy, izay manan-jo hanome tolotra norveziana. Norsk Tipping dia mitantana loteria, filokana ara-panatanjahantena ary lalao eo noho eo, ary i Norsk Rikstoto dia mifehy ny filokana amin'ny hazakaza-tsoavaly. Malaza tokoa ny slots ao amin'ny firenena, saingy voarara tamin'ny 2007 izy ireo, ary natolotra indray tamin'ny endrika terminal video interactive izay mitaky karatra manokana. Ireo karatra ireo dia mifamatotra amin'ny kaontin'ny banky an'ny mpilalao ary iharan'ny fetra henjana.
Gambling amin'ny Internet ao Norvège
Ara-dalàna ny filokana amin'ny Internet any Norvezy, saingy sarotra ny raharaha eto. Norsk Tipping, orinasam-panjakana izay mifehy ny filokana amin'ny loteria sy ny fanatanjahan-tena rehetra any Norvezy, dia niditra an-tserasera tamin'ny 2002. Amin'izao fotoana izao dia ity no tranonkala tokana ahafahan'ny mpilalao norveziana mametraka ara-dalàna ny filokana ara-panatanjahantena, hatramin'ny Desambra 2008 hampiasa ny tolotr'ireo tranonkala vahiny filokana an-tserasera any Norvezy dia tsy ara-dalàna.
Ny fandrarana dia misy ny fizaran-tany mitovy amin'ny lalànan'ny filokana any Etazonia - Tsy mahazo mamindra vola avy amin'ny kaonty norveziana any amin'ny kaontin'ny mpandraharaha filokana vahiny ny Norges Bank. Saingy, ny governemanta dia mikasa ny hamarana ny fanakanana ireo mpamatsy vahiny dia mbola tsy nampiharina, ary misy mpandraharaha vahiny azon'ny mpilalao eo an-toerana.
Lisitry ny Top Sites 10 Norwegian Online Casino
Sites misy casinos amin'ny aterineto izay manaiky mpilalao avy any Norway
Jereo ny lisitry ny tranokala an-tserasera izay manaiky mpilalao avy any Norvezy, ary manolotra lalao kalitao sy azo antoka. Eto ianao dia hahita fialamboly marobe manomboka amin'ny masinina slot ka hatramin'ny lalao casino mivantana amin'ireo mpivarotra rindrambaiko malaza toy ny NetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming, sy ny maro hafa.
Azonao atao ihany koa ny mamaky ny fanadihadinay momba ny tranonkala kazinina ao amin'ny aterineto, mba hahafantaranao ny fampiroboroboana tsara indrindra amin'ny Internet, bonus sy safidy azo vidiana ho an'ny mpilalao avy any Norway.
Androany dia manohy ny dianay mamaky ny firenena Scandinavia izahay ary ny làlanay dia miorina amin'ny firenena mahafinaritra an'i fjords, riandrano mahafinaritra, ranomandry ary auroras polar - any Norvezy. Ity firenena mahavariana misy toetrandro masiaka ity dia tsy mamela anao tsy hiraharaha. Mamakivaky ny araben'i Oslo izahay, ary koa mamantatra ny fandehan'ny raharaha amin'ny filokana. Inona ny tsiambaratelo sy ny mampiavaka ny firenena?
Norvezy - kely momba ny firenena sy ny tantarany;
Ny casinos natsangana ao amin'ny firenena dia tsy misy ankehitriny ary tsy ara-dalàna;
Ireo orinasa roa «Norsk Tipping» sy «Norsk Rikstoto» - dia nahazo alalana hitarika filokana;
Lota nomena alàlana, filokana amin'ny hetsika ara-panatanjahantena, karatra marika, keno, poker hatramin'ny 2015.
Casinos amin'ny aterineto ao amin'ny firenena:
Ny casinie vahiny rehetra dia voarara hatramin'ny 2010, maro no mbola mandeha tsy ara-dalàna, satria tsy voasakana ny tranonkala iraisam-pirenena rehetra;
norsk-tipping.no/kongkasino - ilay tranonkala tokana nankatoavina.
Efatra dimy ny renivohitra Oslo renivohitra Oslo miaraka amin'ny adiresy;
Zava-baovao mahaliana momba an'i Norvezy sy ny mponina ao aminy.
Tantara fohy momba an'i Norvezy
Norvezy dia ny fanjakan'i Eropa Avaratra, izay misy any amin'ny faritra andrefan'ny saikinosy Skandinavia. Ahitana ny fanaparitahana nosy kely ihany koa ny firenena.
Azo inoana fa avy amin'ny teny Old Norse ny anaran'ilay firenena ” Norðrvegr “, Izay midika hoe“ ny làlan'ny avaratra. ” Ary tokony homarihina, ny toetrandro tena henjana ao amin'ny firenena dia namela ny tantarany tamin'ny tantarany. Taorian'ny vanim-potoanan'ny ranomandry tany Norvezy ankehitriny dia toetrandro tena tsara tokoa, noho izany dia be mponina.
Saingy noho ny fitomboan'ny hakitroky ny tany dia nihena, ary ny antsasaky ny lahy dia naniry fatratra laza sy harena. Noho izany, tsy ho ela ny vanim-potoanan'ny fandresena Viking, ny faritany ahazoana an'i Torkia ihany no fidiram-bola.
Tamin'ny taonjato faha-18-19, i Norvezy dia teo ambany fitaoman'i Danemark mpifanila vodirindrina sy Soeda ary saika very ny maha fanjakana mahaleo tena. Saingy tamin'ny taona 1905 dia nofoanana ny valim-pifidianana malaza ary nanjary nanjakazaka ny firenena. Ankehitriny dia mpanjaka manjaka amin'ny lalàm-panorenana Norvezy, ny anaran'ny mpanjaka dia Harold V.
Aleo lazaina indray miaraka fa ny filokana eto amin'ity firenena ity dia tena strogo. Raha ampitahaina amin'ireo firenena mpifanolo-bodirindrina aminy dia Sweden sy Failandy no lalàna henjana indrindra amin'ny filokana. Ao amin'ny firenena dia tsy misy afa-tsy orinasa 2 («Norsk Tipping» sy «Norsk Rikstoto»), izay mahazo alalana hanao filokana. Amin'ny ankapobeny dia loteria izany, filokana amin'ny hetsika ara-panatanjahantena ary keno. Izy ireo dia iharan'ny minisiteran'ny Kolontsaina, izay mamaritra ny lalàny manokana ihany koa. Anisan'izany ny fetran'ny taona 18 taona.
Ny milina slot any Norvezy dia nisy voninkazo haingana tamin'ny taona 2001-2004, saingy tamin'ny 2007 ny governemanta dia nametraka fifehezana henjana ny habeny ary nampihena be ny isan'izy ireo. Ny filokana an-tserasera eto amin'ny firenena dia tsy nanana vintana tsara kokoa: nanomboka ny volana jona 2010, voarara ny tranokala lehibe rehetra any andafy, ary ny banky dia manakana ny carte de debit sy carte de crédit rehetra any amin'ireo casino norveziana an-tserasera erak'izao tontolo izao.
Mazava ho azy, raha te handamina partiyu- poker hafa ianao ao an-trano dia ho tsinontsinona ianao amin'izany. Saingy raha misy masoivohona mpampihatra lalàna sy rafitra voatendry amin'ny toe-java-miasa sahaninao - tsy ho afa-miala ianao. Noho ny fiheverana henjana toy izany amin'ny filokana amin'ny vaovao dia matetika no nanaparitaka tatitra momba ny fanaovana bemidina any amin'ny trano filokana tsy ara-dalàna sy klioba poker, ary ny filan'ny mpankafy dia mila milalao fialamboly ivelan'ny firenena.
Tranombakoka Viking Ship. Adiresy: Huk Aveny 35. Hatramin'ny 1931, io sambon'ny sambo io dia mahafinaritra ny saina sy saina saina turistov.Ekspozitsiya dia sambo 3, naorina tamin'ny taonjato faha 9, ary nilaozin'ny moron-drano mihoatra ny 1,000 taona.
Munch Museum. Adiresy: Toyengata, 53 taona. Ity tranombakoka ity dia nanangona sary hosodoko, afisy, sarisary ary artifact 28,000 izay niaraka tamin'ny fiainan'ilay mpanakanto lehibe. Mpitsidika latsaky ny 18 taona maimaimpoana miditra amin'ny tranombakoka. Asehoy eto ny sarimihetsika momba ilay mpanakanto ary mampiantrano fampisehoana sy fampisehoana.
Amusement Park "Tusenfrid". Adiresy: Hoyungsletta, 1407 As (sahabo ho 20 km miala an'i Oslo). Nandritra io valan-javaboary io dia nahazo ny lazan'ny zaridaina fialamboly tafahoatra any Scandinavia. Raha manana hozatra vy ianao, dia mamporisika anao izahay hanandrana ny «Speed ​​Monster»: fiara hazakazaka manana tanjaka 6,000 horsepower dia hampivelatra hafainganam-pandeha 90 km / ora ao anatin'ny 2 segondra monja ary ny fihetsiketsehana 7 dia hahita ny tenanao ianao ao anaty fanjakana tsy misy lanjany. Eo koa ny zaridainan'ny rano, ny manintona ny ankizy ary ny kafe maro.
Park "Gustav Vigeland." Adiresy: vavahady Nobel 32. Tianao ve ny mandinika ny sary vongana eny amin'ny habakabaka? Avy eo ity safidy ity dia tonga lafatra ianao. Eto, eo amin'ireo hazo voakarakara sy ny endrika mahafinaritra dia ahitanao sary sokitra 212 vita amin'ny granita sy varahina.
Tranon'ny lapan'ny tanàna. Adiresy: Fridtjof Nansens plass. Trano manan-tantara mahaliana avy any ivelany sy ao anatiny no tena mahaliana. Hatramin'ny 1990 dia notanterahina teto ny loka Nobel. Ao anatin'ilay trano no ahitanao haingon-trano tsara tarehy sy sary hosodoko mahafinaritra ary fresko marefo.
Zavatra mahaliana momba an'i Norvezy sy Norveziana
Norvezy dia firenena kely - mponina manodidina ny 5 tapitrisa monja. Ny harena voajanahary lehibe any Norvezy - solika. Hita izany tamin'ny 1969 ary efa natondrana tany Eropa;
Noforonin'i Johan Valer ny Norwegian Paperclip ary nosoratany;
Ny toetr'andro any Norvezy dia miova amin'ny hafainganam-pandehan'ny varatra. Misy mihitsy aza ny fitenenana mifandraika amin'izany: “Tsy tiako ny toetrandro? Tsy olana, miandry 15 minitra “;
«Brunost» - fromazy volontsôkôla, iray amin'ireo sakafo matsiro indrindra eto amin'ity firenena ity;
Isan'ny zaza ao amin'ny fianakaviana eto no famantarana mazava indrindra amin'ny fiadanam-po. Ny salanisan'ny ankizy ao amin'ny fianakaviana - telo;
Ny palitaon'ny mpanjaka dia azo vakiana ny teny filamatra hoe "Ho an'i Norvezy rehetra";
Vola an'arivony 5 ka hatramin'ny 7 arivo euro, saingy avo ny hetra eto amin'ity firenena ity, ary lafo be ny vokatra, saram-pitaterana lafo kokoa (taxis, fanamboarana, sns.);
"Aquavit" (latinina ho an'ny "rano velona") - ny zava-pisotro misy alikaola nasionaly ao amin'ny 35 - 50% dia alikaola ovy voahodina, nampidirina am-polony taona maro tamin'ny zava-manitra (komina, koriana, fennel, anise, kanelina, fennel, St. John's wort). Aza mividy toaka fotsiny anefa. Amidy amin'ny fivarotana «Vinmonopolet» ihany no amidy azy. Ity tambajotra alkomarketov ity dia an'ny fanjakana ary miasa amin'ny andro faran'ny herinandro ihany.
Norvezy eo amin'ny sarintanin'i Eoropa
0.1 Gambling amin'ny Internet ao Norvège
0.2 Lisitry ny Top Sites 10 Norwegian Online Casino
2.1 Sites misy casinos amin'ny aterineto izay manaiky mpilalao avy any Norway
3.0.1 Tantara fohy momba an'i Norvezy
3.1.1 Oslo attractions
3.1.2 Zavatra mahaliana momba an'i Norvezy sy Norveziana
3.1.3 Norvezy eo amin'ny sarintanin'i Eoropa